Isikhathi esifushane / iholide lets - amafulethi amabili ombhede (x2) angalala 6
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Midlands » Birmingham » Isikhathi esifushane / iholide lets - amafulethi amabili ombhede (x2) angalala 61
Ukuvuselelwa kokugcina 2020-10-14
Isikhungo: Niro Living
Ikhodi Yokuposa: B1 1JX
Izici: 24 Hour CCTV, B1 location (near city centre) Parking, Concierge, Free WiFi, Maid Service and fully furnished with new furniture
Indawo Yesikhungo Sendawo ene-MAHHALA Yokupaka Enikela nge-WiFi yamahhala ne-Netflix, izivakashi nazo zingazuza kumahora wethu wamahhala wokupaka nokuphepha okuphephile kwamahora angama-24. Le Ndlu Yesithabathaba isenkabeni yeBirmingham City Centre, ngaphakathi kwamamitha ayi-550 ukusuka eGas Street Basin nasemayadini angama-550 ukusuka ku-Broad Street. Leli fulethi linamakamelo okulala ama-2 (elilodwa linombhede wosayizi wamakhosi), igumbi lokugeza elise-en-suite nendlu yokugezela enkulu enebhavu / ishawa, i-TV eyisikrini esicaba, ikhishi eline-microwave nomshini wokuwasha. Amaphuzu athandwayo atholakala eduze kwefulethi afaka iBrindley Place, ICC neSymphony Hall. Isikhumulo sezindiza esiseduze yiBirmingham Airport, amamayela ayi-7.5 ukusuka eCentral Birmingham Apartments. £ 80 ubusuku ngabunye Sicela uxhumane ne-imeyili engezansi ukubhuka
Ibhaliswe ku 14. Oct 2020
Ibhaliswe ku October 14, 2020
&nbspBirmingham in West Midlands, B1 1tb
&nbspBirmingham in West Midlands, B13 9py
&nbspBirmingham in West Midlands, B26 3xn
&nbspBirmingham in West Midlands, B43 5at
&nbspBirmingham in West Midlands, B1 1tw
&nbspBirmingham in West Midlands, B13 9ht
Izikole eziseduzane B1 1JX